Shift စျေး - အွန်လိုင်း SHIFT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Shift (SHIFT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Shift (SHIFT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Shift ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
SHIFT – Shift
Market ကဦးထုပ်: $426 359.00
volume_24h_usd: $108 505.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Shift တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Shift များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ShiftSHIFT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.2ShiftSHIFT သို့ ယူရိုEUR€0.17ShiftSHIFT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.153ShiftSHIFT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.183ShiftSHIFT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.81ShiftSHIFT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.27ShiftSHIFT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.48ShiftSHIFT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.75ShiftSHIFT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.268ShiftSHIFT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.28ShiftSHIFT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.49ShiftSHIFT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.55ShiftSHIFT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.09ShiftSHIFT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹15.02ShiftSHIFT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.33.61ShiftSHIFT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.275ShiftSHIFT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.303ShiftSHIFT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿6.25ShiftSHIFT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.39ShiftSHIFT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥21.22ShiftSHIFT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩238.12ShiftSHIFT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦75.86ShiftSHIFT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽14.77ShiftSHIFT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5.53
ShiftSHIFT သို့ BitcoinBTC0.00002 ShiftSHIFT သို့ EthereumETH0.000539 ShiftSHIFT သို့ LitecoinLTC0.00354 ShiftSHIFT သို့ DigitalCashDASH0.00211 ShiftSHIFT သို့ MoneroXMR0.00217 ShiftSHIFT သို့ NxtNXT14.49 ShiftSHIFT သို့ Ethereum ClassicETC0.0294 ShiftSHIFT သို့ DogecoinDOGE57.87 ShiftSHIFT သို့ ZCashZEC0.0022 ShiftSHIFT သို့ BitsharesBTS7.85 ShiftSHIFT သို့ DigiByteDGB7.49 ShiftSHIFT သို့ RippleXRP0.697 ShiftSHIFT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00691 ShiftSHIFT သို့ PeerCoinPPC0.675 ShiftSHIFT သို့ CraigsCoinCRAIG91.33 ShiftSHIFT သို့ BitstakeXBS8.55 ShiftSHIFT သို့ PayCoinXPY3.5 ShiftSHIFT သို့ ProsperCoinPRC25.16 ShiftSHIFT သို့ YbCoinYBC0.000108 ShiftSHIFT သို့ DarkKushDANK64.26 ShiftSHIFT သို့ GiveCoinGIVE433.86 ShiftSHIFT သို့ KoboCoinKOBO47.35 ShiftSHIFT သို့ DarkTokenDT0.184 ShiftSHIFT သို့ CETUS CoinCETI578.3
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 17:45:03 +0000.